शरीरका कुनै क्षेत्र यस्ता संवेदनशील हुन्छन्, जहाँ पटक–पटक हात लगाउँदा विभिन्न संक्रमण हुनुका साथै रोग नै लाग्न सक्छ । एक्सपर्टका अनुसार यस्ता अंगमा अतिआवश्यक समयबाहेक पटक–पटक
हात लगाउनुहुँदैन :
कानमा कहिल्यै पनि औँला वा अरू वस्तुले पटक–पटक घोच्नुहुँदैन । मेडिसिन आफ युएससीको हेड एन्ट नेक सर्जरीका प्रमुख प्रोफेसर नोन के निपार्कोलेभ नेकाले भनेका छन्, ‘कानमा औँला या कुनै चिजले खोतल्दा झिल्ली फाट्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।’
छाला रोग विशेषज्ञ अदनान नसिरले भनेका छन् कि तपाईंले अनुहार सफा गर्दा वा क्रिम लगाउँदाबाहेक आफ्नो पञ्जालाई अनुहारबाट टाढा राख्नुस् । किनभने, हातलाई जस्तोसुकै ठाउँमा पनि राख्न सकिन्छ, त्यसैले हातमा रोगका जीवाणु सर्छन् । त्यस्तो हातले पटक–पटक अनुहार छुँदा बिरामी हुने र थकान बढ्ने समस्या हुन सक्छ ।
पुछ्ने र धुने समयबाहेक नितम्बमा कहिल्यै पनि हात राख्नुहुँदैन । हार्वरब्यु मेडिकल सेन्टरको आफ्टर केयर मेडिकल डाइरेकटर एमडी जेयर्ड डब्लू क्लेनले भनेका छन्, ‘नितम्बमा पटक–पटक छुँदा खराब व्याक्टेरियाका कारण समस्या सिर्जना हुन्छ । यदि नितम्बलाई छुन आवश्यक परेमा पहिले राम्रोसँग हात धुन जरुरी छ ।
आँखमा कसिंगर परेको अवस्था या सफा गर्ने समयबाहेक हात राख्ने गर्नुहुँदैन । आँखामा पटक–पटक छुँदा रोगका जीवाणु प्रवेश गर्छन् । जसले आँखामा इन्फेक्सन हुने खतरा हुन्छ । आँखालाई मिच्ने पनि गर्नुहुँदैन ।
मुखमा औँला राख्ने बानी पनि गर्नुहुँदैन । एउटा रिसर्चले भनेको छ कि एक घन्टाको समयमा मानिसले औसत २३ दशमलव ६ पटक औँला मुखमा राख्ने गर्छन् । व्यस्त समयमा पनि ६ दशमल ३ पटक मुखमा औँला राख्ने मान्छेको बानी हुन्छ । तर, यसो गर्दा मानिसमा एकतिहाइ रोगको संक्रमण प्रवेश हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
हस्पिटल एपिडेमायोलजी जर्नलमा २००६ मा प्रकाशित नाक, कान र घाँटीबारे अध्ययनले नाकमा औँला राख्दा शरीरमा स्टेफाइलोकाक्स ओरस नामक ब्याक्टेरिया प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ, जुन निकै खतरनाक मानिन्छ । जसले शरीरमा कैयौँ इन्फेक्सन गराउँछ ।
नङभन्दा तलको छालामा पनि कैयौँ ब्याक्टेरिया हुन्छन् । ब्रिटिस छाला रोग केन्द्रका विशेषज्ञ डेविड डे बर्करले भनेका छन्, ‘नङलाई सधँ छोटो राख्न आवश्यक छ । यसो गर्दा उक्त स्थानमा हुने ब्याक्टेरियाको मात्रालाई घटाउँछ । र, नङमा भएको फोहोर हटाउन जहिले पनि नेल ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पेटमा ग्यास भरिएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी...
हप्तामा दुई दिन मात्र कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब सङ्...
के तपाईंलाई थाहा छ ल्वाङबाट हुने यी चामत्कारिक ५ ...
पुल उद्घाटन गर्न खोज्दा पौडेल पक्राउ
यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका सम्भावित ४ कदम
पेटमा ग्यास भरिएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय
यी हुन् ‘हर्ट अट्याक’का ५ कारण, कसरी बच्ने ?
महाभारत : भीष्मलाई वाणशय्यामा देखेर किन हाँसिन् द्रौपदी ?
चीनले बनायो तिव्र गतिको जेट इन्जिन, विश्वको कुनै पनि कुनामा दुई घण्टामा पुग्न सकिने
निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्छौ : अर्थमन्त्री पौडेल
के कुराले दुखायो अमिताभको मन ?